मिर्गौला फेर्ने तयारी गर्दागर्दै प्रधानमन्त्रीमा देखिएको त्यो एपेन्डिसाइट - Dainik Nepal
मिर्गौला फेर्ने तयारी गर्दागर्दै प्रधानमन्त्रीमा देखिएको त्यो एपेन्डिसाइट
दैनिक नेपाल २०७६ मंसिर १३ गते १३:११
काठमाडौं, १३ मंसिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यतिबेला एपेनिडसाइटको अप्रेशन गरी आराम नगरेको भए मिर्गौला प्रत्यारोपणको निर्णयसहित तयारीमा पुग्ने थिए ।
चुनावी सभालाई सम्बोधन गरी उनी मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अमेरिकी प्रविधिको उपयोग गर्ने तयारीमा पनि थिए । तर, अचानक गत सोमबार राती उनलाई अत्यधिक दुखेपछि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा रहेको मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्टमा पुगेपछि पत्तो लाग्यो, एपेन्डिसाइट भएको ।
त्यसपछि यहि उपचारमा चिकित्सक सक्रिय भए । मिर्गौला प्रत्यारोपणको तयार या निर्णयबारे यतिबेला कुरा गर्ने अवस्था नै थिए ।
‘पहिला त प्रधानमन्त्रीको तत्कालिक समस्यालाई समाधान गरेपछि मिर्गौला प्रत्यारोपणका विषयमा कुराकानी अघि बढाउने तयारी थियो’, ओलीनिकट स्रोतले भन्यो,‘दिनदिनै डायलासिस गरिरहनु परेका कारण मिर्गौला प्रत्यारोपणको निर्णयमा प्रधानमन्त्री आफैं पुग्नुभएको थियो ।’
मिर्गौला फेर्ने तयारीअनुसार नै प्रधानमन्त्रीमा आत्मबल बढेको थियो । प्रधानमन्त्री आफैंले पनि ५ पटकसम्म विश्वमा मिर्गौला फेरिएको उदाहरण दिँदै आफूले दोस्रो पटक गर्ने जानकारी दिएका थिए । तर उनमा अचानक एपेन्डिसाइटको समस्या देखिएपछि पहिला त्यसको उपचार गर्न चिकित्सक सक्रिय छन् ।
‘लगभग उहाँले एक साता आराम गर्नुहुन्छ । त्यसपछि मिर्गौला फेर्ने नफेर्ने विषयमा सल्लाह हुन्छ’, मिर्गौला रोग विशेषज्ञ तथा प्रधानमन्त्री ओलीकी नीजि चिकित्सक डा. दिव्यासिंह शाहले भनिन्,‘अहिले उहाँको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार भएको छ, चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन ।’
एपेन्डिक्स नफुटेको भए पनि प्रधानमन्त्री लामो समय अस्पतालमा बस्नुपर्ने थिएन । डायलासीस त नियमित प्रक्रियामा थियो र दिन विराएर उनले गरिरहेका नै थिए ।
मंगलबार प्रधानमन्त्रीको एपेन्डिसाइटसको शल्यक्रिया गरेका डाक्टर रमेशसिंह भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओली दुई साता आराम गर्नुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्रीको एपेन्डिक्स फुटपछि पेटमा संक्रमण भएको थियो । अहिले त्यो संक्रमण हटिसकेको छ । घाउ निको हुन अझै साताजति लाग्छ । त्यसपछि मात्र उनको मिर्गौला फेर्ने विषयमा डाक्टरसहित, परिवारका सदस्य र प्रधानमन्त्री स्वयम् पनि निर्णयमा पुग्ने बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको एपेन्डिसाइट निको भएपछि मिर्गौलाको मात्र समस्या बाँकी रहन्छ । डा. शाहका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई यी दुईबाहेक अन्य रोग या समस्या छैन ।
सिद्धबाबा कृष्णदास गिरीलाई पक्राउ गर्न अदालतकाे आदेश
विशेष अवस्थामा अझै उत्कृष्ट सेवा प्रदर्शन गर्नुपर्छ : महानिरीक्षक खनाल
मेगा बैंक बन्यो ‘बैंक अफ दि इयर’
राष्ट्रपति भण्डारी जनकपुर जाँदै, भारतबाट आएका जन्तीलाई स्वागत गर्ने
आईसीयूमा रहेका प्रधानमन्त्रीलाई प्लेटलेट्स चढाइयो
मोटरसाइकल ‘ओभरटेक’ गरेको भन्दै युवकको कुटपिट गरी हत्या
संसदीय समिति कालापानी जाने
भ्रमण वर्ष सफल पार्न उद्योगीले प्रयास थाले
रक्षामन्त्री पोखरेलद्वारा काठमाडौँ-तराई/मधेश द्रुतमार्ग निरीक्षण